Esikhathini sesitshalo seGarcinia Cambodian sekuyisikhathi eside sesimisiwe isimo sethimba eliphumelelayo lokulahlekelwa isisindo. Uma sicabanga ngalesi simangaliso semvelo kusuka ekubonweni kwesayensi, ke singaqonda ukuthi izithelo zaleso sitshalo ziyimithombo ye-hydroxyl-ammonium acid (GCR). Zisebenza njengezinto ezibonakalayo, okungukuthi, i-catalyst ephula kahle ama-fatty deposits. Lesi sitshalo sinenhloso ehlukile, isebenza njengejubane ekusetshenzisweni komzimba kanye nendlela yokunciphisa umuzwa wendlala.
Okuningi mayelana ne-Garcinia
Lesi sitshalo sibhekiswe emndenini wezilwane ezincelisayo. Njengabafowabo, i-Garcinia Cambodian yenza umzimba ngomzimba ngokuqinisa isimiso somzimba. Kodwa umphumela ufika kuphela ngokusetshenziswa okuhlelekile nokulungile ngaphandle kokuphulwa kwemithetho.
Izithelo ze-Nayug ne-mpumalanga ye-Asia i-Garcinia isebenza njengesiphuzo. Ijusi elivela ezitshalweni nasezikhwameni livame ukunconywa ukusetshenziswa ngesikhathi sokudla, ikakhulukazi uma izitsha zigajwe kakhulu noma zinamafutha amaningi. Le ndlela iye yaziwa isikhathi eside, ngoba inomphumela othile emzimbeni, isiza uhlelo lokugaya.
Sitshala ukulahlekelwa isisindo
Okokuqala, kuyadingeka ukunquma imingcele ye-qualitative yesitshalo nokuqonda, khona-ke umholi usebenza kahle futhi, uma kunjalo, lapho kungathengwa khona.
Ngempela, abantu abaningi basebenzisa i-Garcinia Cambodia lapho beqeda ama-kilo okwedlulele. Ukubunjwa kwe-fetus kufaka inani elikhulu le-pectin. Uma i-garcinia ithathwa ngaphakathi ngamanzi (ngokuvamile amanzi ahlanzekile ahlanzekile), khona-ke i-gel ekhethekile iyokwakhiwa esiswini. Leli gel litholakala ezihlakalweni ezihlangene zalesi sitshalo futhi liholele ekuqinisekiseni ukuthi isisu sisigcwalisa ngokuzenzakalelayo. Umphumela omkhulu kunawo wonke uGarcinia athatha ukukhipha izimpawu zendlala. Okokuthi, isifiso siphuka kakhulu, esiza ukuthatha ukudla okuncane.
Ngokuvamile lolu hlobo lwesitshalo lusetshenziselwa izinjongo zokwelapha, ngakho-ke lungabonakala emiphilisi eminingi yokudla.
Ososayensi benza inqwaba yokuhlolwa kokusebenza komphumela wezitshalo emzimbeni womuntu. Enye yezivivinyo zenziwa ngumyalelo okhethekile ovela kwenkampani "Umbono". Ngenxa yomsebenzi owenziwe, ososayensi baye bafakazela ukuthi uGarcinia unomngcele wokusebenza we-90% uma usetshenziswa ngokuhambisana nezinye izinhlobo ze-fiber.
U-Nouchenov futhi waphazamisa enye iqiniso. Njengoba wazi, abesifazane abaningi, abafuna ukunciphisa isisindo, bakhetha ukungazidicili kakhulu, ngakho-ke balawula izimali ezikhethekile kuphela. Eminye amaphilisi, kuboniswa ukuthi umuthi owodwa uphumelele, imithi eyodwa ayanele, ngoba nayo idinga ukulandela ukudla okukhethekile (ezikhathini eziningi, ukudla okuqinile).
Izinkomba ezishicilelwe ngokusemthethweni, zinokungahambisani nokuphikisana okuningi komunye nomunye.
Kanti, abamele inkampani "iMason Vitamins" bavame ukuphikisa ukuthi umphumela we-garcinia usaqhubeka futhi isitshalo siphuthuma ngempela ukushintshaniswa kwezinto. Baphinde babonisa umbono wabo ngokuphendula okusheshayo, ukungena kwezifundo zabo zangasese kubonise ukuthi ukushintshwa akusheshi nje, kodwa izikhathi ezimbalwa, futhi izinga lokugaya ukudla okunamafutha liyehla.
Izivivinyo ezikhethekile zenziwa ezilwaneni. Idatha efunyenwe yabonisa ukuthi, ngokumamukela okuhle, i-massel iqala ukwehla ngisho nalabo bantu, ukukhuluphala okunomlingiswa we-pathological. Izilwane ezinjalo zakhethwa ngokukhethekile ukuze zihlolwe ngaphambilini, futhi zalimala esifundeni se-hypothalamus noma zinezifo ezithinta izifo ezithile. Kodwa esimweni esinikeziwe, ukuphumelela kwafinyelelwa ngokushesha ngokunciphisa ukudla kunokuba ngcono izinga lokunciphisa umzimba.
Abacwaningi abahlanganyela emsebenzini ochazwe ngaphambili baqhubeka futhi baqasha iqembu elikhethekile lamavolontiya. Ekugcineni, kwaba ngu-80% wabantu abadlule ukuhlolwa, banciphisa kakhulu isisindo. Ngokwesilinganiso, ama-indices abonisa ukuthi, ngaphandle kokushintsha ukudla okuphoqelelwe nemisebenzi yomzimba, abaphenduliwe balahlekelwe kilogram (2 kg ezinyangeni ezimbili). Kodwa lokhu kusikisela ukuthi ukulahlekelwa kwesisindo esisheshayo nokuphumelelayo kufanele ulandele ukudla.
U-GLKi nomsebenzi wakhe awukwazi ukuhlobana nomthelela ohlelweni lwesigungu sezinzwa. Lena izinga eliphawulekayo eliqhathaniswa nezidakamizwa, isibonelo: Merid noma ylindax. Eqinisweni, isifiso nesidingo sokudla sincishiswe ngokulinganisa izinga leshukela egazini, futhi ngokunciphisa lapho uthola ama-carbohydrate athile.
Umphumela we-Garcinia okhishwayo ukuthi i-glycogen iqoqa esibindi, kepha uma usebenzisa isitshalo, ukugaya amafutha okuqala kuqala ukuvimbela. Kungenxa yalesi senzo ukuthi abakhiqizi abaningi bafaka imfundo into okuthi i-GLC inciphise ukulangazelela ukudla okunomsoco.
Izithako zokudla kanye nokudla
Uma wenza umsebenzi wezocwaningo, ungabona ukuthi isitshalo seGarcinia siyingxenye cishe yezinye izithako zokudla. Unganika isibonelo samagama wemikhiqizo: Citrimax, Garcinia Forte, Turboslim. Lezi zinkampani ngesisekelo sokusetshenziswa okusebenzayo ekubunjweni kwezinsiza zabo zokusindiswa kwesisindo isitshalo. Kodwa kwezinye izinkampani uGarcinia kuyisici esibalulekile.
Kumele uqaphele ukuthi umsebenzi wamalungiselelo ikakhulu kuxhomeke ekutheni ukulinganisela kokudla komthengi nsuku zonke kungakanani. Uma ukhetha ukudla ukuze unciphise ama-carbohydrate, khona-ke umuthi cishe awusizo. Isizathu salesi sici ukuthi isibonakaliso sinikezwa ebuchosheni lapho isibindi sigcwele isabelo se-glycogen. Uma ugwema ama-carbohydrates, isitoreji siphelile, okuholela ekusebenzeni okuphansi kwezinsiza zokudla.
I-Garcinia izobaluleka kuphela kulabo abathengi abagcina ukudla okunomsoco okufanele noma bakhetha ukudla ezinkantini zabo zokudla, izithelo, njll. le ndlela izokusiza ukuba ususe ngokushesha isisindo esiningi.
Kodwa kulabo abangakakulungeli ukunikela ekudleni okuphansi-carb, enye inketho izosiza. Kulokhu, akufanelekile ukukhetha amaphilisi ngesitshalo, kodwa i-powder ye-ugarncinium ne-fiber. Izimali ezinjalo azilutho ukuthola, njengoba zisakazwa kabanzi futhi zithandwa kumafemu okumaketha, kanye nakuma-pharmacy ochungechunge olukhethekile lwezokwelapha. Ukwakhiwa kwezidakamizwa kufaka i-pectin, egcwalisa ngokushesha futhi igcwalise ngempumelelo isisu, - le ndlela isisiza ukucindezela umuzwa wendlala.
Ukuze kuzuzwe umthelela omkhulu, ngisho nasemkhakheni wokuqinisa amasosha omzimba, kunconywa ukuba usebenzise isigamu semali ye-garcinia. Lokhu kuyincoma kulabo abalandela ukudla.
Kodwa ngaphambi kokuba uthathe isinqumo sokuthatha izithako zokudla, akunandaba ukuthi uluhlobo luni, udinga ngempela ukubonisana ne-endocrinologist. Kuphela kuphela okungalungile ukuthila umthamo bese ubala ukuthi unanoma yikuphi ukuphikisana kokuthatha lokhu noma lokho okulungisa.
Ukwelashwa kokuqedwa okungapheli komuthi womuntu
Amakhambi omphakathi wekhanda eliboshiwe
Amavithamini awusizo womzimba womuntu
Isaladi nge kohlrabi kanye nomsuka we-parsley
Ukunciphisa indlala nokudla
Izitayela zezinwele zeNyaka Omusha
Ukuhlaselwa ekhaya ubuso: izici zesicelo kanye zokupheka
Ukuzethemba okuphansi nokuziphendulela
Omelette roll nge isipinashi, amakhambi kanye pepper sweet
Umyalezo ovela eFrance: UJolie wazala amawele
Yenza ku-prom prom princess
Umlando kaSophia Loren
Izimvu zezimvu: izakhiwo eziwusizo
Skewers of salmon pink
Isobho ngamakhowe namazambane